I-Twitter ephezulu ye-40 Geospatial -Geofumadas
Meyi, 2014 Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs, egeomates My
I-Twitter iye yathatha indawo enkulu yezi zinto zilandelayo ebesizenza ngokusebenzisa ukutya kwendabuko. Akuthandabuzeki ukuba kutheni le nto yenzekile, kodwa mhlawumbi esinye sezizathu kukusebenza kweendaba ezisuka kwiselfowuni kunye nethuba lokucoca kuluhlu olushiya umxholo ongengowomdla wethu. Kwimeko yam, ndiyalandela ndisebenzisa iFlipboard, kodwa kuyo yonke imihla umxholo endiwubonayo ungaphezulu kokucoca ii-akhawunti ze-Twitter kunye nezinye iisayithi endizaziyo zihlaziywa ngokukhawuleza okucacileyo.
Kucacile, umxholo we-Twitter unexesha lokuphila leeyure, into efana nephephandaba elishicilelweyo ngokwesiko; Akukho mntu ujonga umxholo weentsuku ezimbini ezidlulileyo oye enzonzobileni, kanye nephephandaba langezolo lalisetyenziselwa ukusonga inyama kunye nokugubungela ii-piñatas. I-Twitter, ngokungafaniyo ne-Facebook, inokusetyenziswa okungafaniyo nezinye, kunye neziphumo ezininzi zokwazisa iindaba; Yiyo loo nto isetyenziswa kakhulu ngamagcisa kwaye phantse kuyo nayiphi na inkampani ejonga into ezayo kwi-Intanethi esekwe kwimpembelelo. Kwimeko yokupapashwa kweeblogi ezikhethekileyo kwisihloko, umxholo uhlala uhlala ebomini, uvuselelwa njenge-Google indexes kunye nokurisayikilisha ezinye iindwendwe kunye nezimvo. Ewe kunjalo, icala elingezantsi lebhlog kukuba inqanaba lokupapashwa lihamba kancinci, lishiya uninzi lomxholo omtsha okanye wangaphandle ukuya kwiiakhawunti zakho ze-Twitter. Kwakhona, uninzi lweebhlogger zigqiba ekubeni into yazo ayisiyi-Twitter.
Namhlanje ndifuna ukudwelisa iiakhawunti ezingama-37 ezinxulumene nomxholo we-geospatial endiwulandayo, ezinye zazo bendizijongile okwethutyana. Ndiyibize ngokuba nguGran Cola ngomfanekiso okhutshiweyo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngokubhekisele kwimodeli kweli lizwe ledijithali ephikisana nesikimu semveli sePareto, isenza ukuba iakhawunti nganye ixabise igalelo eliyenzayo kwindalo, apho ixabiso lingelilo kwiimveliso zeenkwenkwezi kodwa kwisambuku sewebhu yonke yesigcawu. Isiqingatha soku yayizithiyori nje kwiiklasi ezingaqhelekanga kwiiDyunivesithi, kwaye kukho umzuzu ekunzima ukuwuqonda:
Namhlanje, i-akhawunti enkulu ayinakuyenza enkulu kunye Twit, ukuba akukho luhlu lwe Retwits ezisasaza iindaba kwiwebhu yoluntu. Kwimeko yoshicilelo olupapashiweyo, uhlobo olukhulu lokuprinta lwaluzenzela lodwa.
Senze ngaphambili ukulandelela kunye neengcebiso zeakhawunti, eyokugqibela ibikunyaka nje odlulileyo. Namhlanje ndiza kusebenzisa imeko ebonakalayo, ukwahlula eli qela leakhawunti ezingama-37 kubuncinci amaqhekeza ama-5, ndisebenzisa uMeyi 24, 2014 njengesalathiso.Nangona olu luhlu luphawulwe kukujoliswa kweGeofumadas ngamaSpanishi, kubandakanya neakhawunti ezili-12 zesiNgesi kwaye ezimbini ngesiPhuthukezi.
Makhe sibone oko sikubiza ngokuba yi-40 ye-Geofumadas ephezulu kwi-Twitter.
I-Geospatial ephezulu, ii-akhawunti ezinkulu ze-Twitter.
Ukufaka isicelo sendlela yokubonisa kwiiakhawunti ezingama-37, ibonisa imeko yendlela enqamlezileyo yabalandeli abayi-13,920.
I-4 yalezi zivela kwi-Anglo-Saxon imvelaphi (ephawulwe kuyo obomvu) ngelixa omnye wasePhuthukezi umvelaphi (ephawulwe kuyo green), zine ke imvelaphi yaseSpain, nangona sisazi ukuba ubuNjineli obuBomvu kunye noBunjineli beBhlog azikho ngokukodwa kwicandelo le-geospatial, sizibeka apho kuba zingumlinganiso weeakhawunti ezinokukhula ngokukhuphisana, kunye noGerson Beltrán ongomnye iiakhawunti ezimbalwa ezinegama lobuqu kolu luhlu luphela.
Yonke ingxenye ibonisa umahluko omkhulu phakathi kwabo bobabini, kunye nokuxhuma phantse abalandeli 20,000, apho ezingqinelana igrafu trend kubalandeli 7,000.
Ngaphezulu komgca wokuhamba ziiakhawunti phakathi kwabalandeli abali-10,000 ukuya kuma-20,000. Awunakukutshintsha oku kuhlaziyo lwexesha elizayo esiza kulwenza ngoDisemba:
3. @ injineli 13,066
2 zichanekile ngokwendlela, zahlulwe ngokulinganayo kolunye ulayini:
Into enomdla ngeli candelo lokuqala, nayo bububanzi beemagazini zedijithali ezinxulunyaniswa nokwazisa ngeziganeko zehlabathi, ezishiya inqanaba elilandelayo iimagazini ezazisoloko zikhona ekuprintweni, ezinje ngamatyala e-GIM International kunye neGeoInformatics.
Qaphela ukuba ukuba ndizahlula iakhawunti zangaphambili, ndinegrafu entsha apho unokukwazi ukwahlula amaqela amane, ukuqala ngokuchanekileyo kwi-akhawunti yeGeofumadas, kunye neendlela zokuhamba kunye nabalandeli baka-5,000.
Ukuba simele igrafu efanayo ngendlela yokuhambisa, sibona umbono omele ngakumbi wento ekule ngqokelela yeeakhawunti ezingama-29, kumacandelo angama-25% inye, esiyibiza ngokuba yi-Q1, Q2, Q3 kunye ne-Q4:
Nje 3 25% akhawunti amele abalandeli eziqokelelanayo, ukuba Esri Spain i-akhawunti kuphela mna kubandakanywa isoftware, ukuba inkomba umdla kwicandelo geospatial.
Kweli candelo kukho iGeofumadas. Kube ngamava anomdla ngokukodwa, ukusuka ekuqalekeni kwam ukuya kwimodeli apho ndingakhange ndibone siseko, kwindaleko esiyibonayo ngoku kwezi zilandelayo Iitshathi zoMlandeli
Oku kwakungo-Disemba ka-2012, xa sasinendidi enye kuphela enkulu kunabalandeli abali-100 eMeso America kwaye enye eSpain ingaphezulu kwama-400.
Le yimephu yangoku yabalandeli bethu. Ngeyona ndawo iphambili eSpain, ezimbini eMelika, enye eMexico kunye ezintathu eMzantsi Melika, kubandakanya enye eBrazil.
I-Q2: IiAkhawunti ze-5
Le 25%, ngokungafaniyo neyangaphambili, ineAnglo-Saxon ezintathu kunye neeakhawunti ezimbini zaseSpain. Oku kubonisa ukulibaziseka kwabo bangakukhathalelanga ukungena kuTwitter ngexesha elibonisiweyo, ngaphandle kokubhekiswa kwi-Anglo-Saxon medium, njengoko kunjalo ngeGeoinformatics, ethe yaphulukana nethuba lokugcina igama kwaye kwafuneka ifumane iGeoinformatics1. Into ebangela umdla yimeko yeMephuGIS entsha kodwa inyuke ngamanyathelo anobundlongondlongo, kwaye iakhawunti yeOrbemapa ikwalapha, engasebenziyo kwaye kusenokwenzeka kuhlaziyo olulandelayo luya kuba kwi-Q3.
14. @maphugis 2,668
Ukuguqula ecaleni ukukhula «engavamile«, Ezingazisi ngaphezulu kokudelela kunye negunya elincinci kwiakhawunti, kuyonwabisa ukubona ukuba ukukhula«endalo»Kwi-Twitter inendlela eqikelelweyo ye-25% ngonyaka kwiiakhawunti ezingagqithi kubalandeli abangama-10,000. Ke, ixesha elide kuthatha inkampani ukungena «oko kufuneka ku-Twitter«, Ummandla ongakumbi ukhuphiswano lwakho luya kuphumelela. Kusala umsantsa ngaphandle kokuba kwenziwe iinzame zokuphucula umgangatho wopapasho, uqobo, kunye nokungaguquguquki; ukuze abalandeli abangama-500 umahluko phakathi kweakhawunti enye nenye bahlale behleli.
Apha sinengxelo yemvelaphi yesiPhuthukezi, kwaye zimbini kuphela imvelaphi yeAnglo-Saxon, iimagazini ezaziwa ngokuchanekileyo kwifomathi yokushicilela (Point of Starting kunye neGIM International). Ndiyathemba ukuba iakhawunti yoLuntu ye-IGN, engasebenziyo, kwaye iNosoloSIG sele ilapha, eyangoku kodwa ikhula ngokuzinzileyo.
Olu luhlu alunakuphela, kunye neeakhawunti ezisusela kubalandeli abangama-500 ukuya kwi-1,600. Zimbini kuphela umxholo wesiNgesi.
37. @ ICOMMUNITY_SIG 430
Kwiinyanga ezi-6 siza kwenza uphononongo olutsha, ukubona okwenzekileyo. Kusenokwenzeka ukuba ezinye iakhawunti esizishiyileyo ziya kuqwalaselwa ukuphatha i-40 iyonke, itshathi nokuba ine-28 kwaye ingeyi-29 njengakolu luhlu. Ukukhethwa kwethu ngaphandle kokungabi nazinto kungenxa yeakhawunti esihlala siyilandela kwiGeofumadas, ke ukuba uyazi iakhawunti edlula abalandeli abangama-500 kwaye ucinga ukuba inopapasho oluqeqeshekileyo ...
Post edlulileyo«Ngaphambilini GIM International. uhlelo lokuqala in Spanish
Post Next Ukuba ngumveleli ngumntu obomi bonke.Okulandelayo »
Impendulo enye kwi "Twitter Top 40 Geospatial"
Oscar Martinez uthi:
Siyabonga ngokukhankanywa kwe @masquesig! Uzuko lokuvela kuleluhlu.
Ndiyakuvuyela umsebenzi wakho nabo bonke abantu abasemva kwezi akhawunti. Ukuba unquma ukuwalandela, unokuqiniseka ukuba baya kukugcina ngokusesikweni kwihlabathi elitsha.